Community | Rochak Khabar
11 Dec, 03:37 AM
तर अब भने वैज्ञानिकहरुले चरम सुख,...
7 Dec, 10:03 AM
काठमाडौं, मंसिर २१ – काठमाडौं उपत्यकामा गाडीको चाप अत्याधिक भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ट्राफिक नियम कडाई गर्दै केही नयाँ नियम पनि लागु गर्ने तयारी भइरहेको छ । गाडी र मान्छेको चापले काठमाडौं उपत्यकाका सडक अस्तव्यस्त भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यात...
6 Dec, 03:44 AM
केटी जिस्काउँदा मज्जा आउँछ हो ? यदि हो भने यो लेख एक पटक पढौ !
प्राय केटाहरु मज्जा लिनको लागि केटी जिस्काउँछन् रे । लेखकला...
सानैदेखि अभिनयको सोख चढेको बताउने नैनाले २/३ महिनाको अवधिमा एउटा म्युजिक भिडियोमा काम गरेकी छन् । गीतकार माधव निर्दोष र संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठको ‘आत्मीयता’ एल्बममा समावेश भएको नरेन्द्र प्यासीको स्वरवद्ध गीत ‘तिमीबाट टाढा हुँदा’ बोलको गीतमा नैनाले अभिनय ग...
7 Nov, 03:44 AM
दिदीको लासलाई रुखमा झुण्ड्याइएको थियो : गुप्तांगबाट रगत बगीरहेको थियो
दिदीको मृत्यु मेरो कारणले भयोे । ओनसरी घर्ती मगरको स्टाफ थिएँ ।
रुखमा झुण्ड्याइएको दिदीको गुप्तांगबाट रगत आइरहेको थियो, र शरीरमा गोलीको दाग थियो ।
5 Nov, 09:25 AM
यिनको फेसन, तिनको वाध्यता
हुनेखाने युवायुवतीहरु आजकल यस्तो च्यातिएको फेसन गर्छन् । कसरी सेक्सी देखिएला, हुनेखाने युवायुवतीको सोच यस्तै यस्तै हुन्छ ।
27 Oct, 04:02 AM
ब्लड क्यान्सरबाट ग्रसित अनिका तामाङ्को जिवन बचाइदिनको लागि याचना
ओखलढुंगा मुलखर्क १ ओख्रेका २० बर्षीय अनिका तामाङ्लाई ब्लड क्यान्सर भएको र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण अाफ्नो जीवन बचाइ दिनका लागि सबै संग सहयोगको लागि आग्रह गर्दै गरेका छन् ।
26 Oct, 03:37 AM
३७ वटा देशले नेपालीलाई दिन्छन् अनअराइभल भिसा
पछिल्लो समय नेपालीहरुको विदेश घुम्ने लहर बढ्दै गएको छ। निश्चित खानदानी परिवार तथा व्यापारीहरुमात्र विदेश जाने प्रचलन क्रमभंग भएको छ। व्यापार,अध्ययन भन्दा पनि भ्रमणनकै लागि मात्र विदेश जाने नेपालीहरुको संख्यामा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। 0
15 Oct, 02:12 AM
एक्कासि भूकम्प गएमा कसरी जोगिने : यी हुन् सुरक्षाका वैज्ञानिक उपायहरु ! पृथ्वीका कुनै पनि भागमा जतिबेला पनि भूकम्प जानसक्छ । भूकम्प कत्रो र कहिले जान्छ भन्ने थाहा नहुने हुनाले सबैले आफ्नो तयारी भने गरिरहनुपर्छ ।कसैले यति समयमा यत्रो भूकम्प जाँदैछ भन्ने हल्ला गरेमा त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । यदि, भूकम्प गइहालेमा घर, पूल र बिज...
8 Oct, 03:10 AM
यस्ता रहेछन् कोरियामा कार्यरत नेपालीले रातारात आत्महत्या गर्नुका मुख्य कारणहरु
लामो समय कोरियामा बिताएका उनले प्रवास अत्यन्तै गाह्रो काम भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन् जुन अहिले कोरियामा आत्म हत्याका घटनाहरु दिन प्रती दिन बढदा छन यस्का लागी बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
3 Oct, 02:41 AM
विवाहमा कति उमेर फरक हुनु राम्रो ? जानी राख्नुहोस्
अधिकांश पुरुष आफूभन्दा कम उमेरका लाई विवाह गर्न रुचाउछन् । भविष्यमा त्यही उमेर भिन्नताले यौन जीवनमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको पाइदैंन ।
2 Oct, 02:33 AM
आठ लाख लिएर श्रीमती टाप कसेपछि …
चार वर्षसम्म कमाएको पैसा लिएर श्रीमती अकैंसँग टाप कसेपछि कस्तो होला? यस्तै पीडा ब्यहोर्नु परेको छ नवलपरासी तम्सरीयाका प्रेम कुमालले ।
28 Sep, 03:25 AM
पहिला सहमतिमा यौनसम्पर्क, पछि तिनै युवतीले एकाएक किन हालिन् ‘रेप’को मुद्दा ?
पक्राउ गरेर काठमाडौं नआउँदै थाहा भयो आमा छोरीको नियत कारबाही गराउनुको सट्टा ती युवकका आफन्तसँग सुरु भयो बाग्रेनिङ । आरोपित युवकलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेपछि आमाछोरीले डिएसपी तामाङलाई भने हाम्रो कुरा मिल्यो केटालाई छाडिदिनु । डिएसपी तामाङ छाँगाबाट खसेझं...
ड्राइभरसँग आँखा जुध्ने बित्तिकै बस खस्यो
आफूसँगैका यात्रुहरु गुमाउँदा पनि बाँच्न सफल लामाले बाँच्ने रहर पलाएको भाव व्यक्त गरिन् । लामो समयछि घर गएकी लामाले दुर्घटना र त्यसपछिका दिनहरुबारे पहिलो न्युजका कार्यकारी–सम्पादक मोहन बास्तोलालाई यसरी बताइन्ः
8 Sep, 02:37 AM